Ekuphambukani, Ubuchwepheshe kanye Namagugu - Impendulo ku-athikili kaProf. Yoram Yuval, "Ayiphambuki", Shabbat P. P. Akef Supplement - Ikholomu Eqhubekayo (Ikholomu 26) - Rabbi Michael Avraham
Ekuchezukeni, Ubuchwepheshe kanye Namagugu - Impendulo ku-athikili kaProf. Yoram Yuval, "Ayiphambuki", Shabbat P. P. Akev - Ikholomu Eqhubekayo (Ikholomu 26)
8 imibono	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
Kukholomu okwedlule Ngiphawule ngesihloko sikaProf. Yoram Yuval esithasiselweni seShabbat sikaMakor Rishon P. ngenxa yalo nyaka (XNUMX). Kufanele futhi ubone ingxoxo ethuthuke ezingxoxweni ezingezansi kokuthunyelwe kwami.
Impendulo yami kuProf. Yuval yashicilelwa enguqulweni efushanisiwe esengezo seShabbat P. Ra'a (kanye Amazwana engeziwe Kuyathakazelisa ukuthi wonke afanele ukufundwa ). Nanka amazwi ami abhalwe lapho:
Ekuphambukeni, ubuchwepheshe kanye namagugu
(Impendulo esihlokweni sikaProf. Yoram Yuval esithi, "Abachezuki", isengezo seShabbat uP. Akev)
I-athikili kaProf. Yuval Luca inenhlanganisela ejulile yamagugu namaqiniso. Kunengqondo ukuveza ukuthi lo mehluko wawuyikhandlela ezinyaweni zikamkhulu wakhe ongasekho okukhulunywe ngaye esihlokweni, futhi kuyadabukisa ukuthi uyakushaya indiva.
Amazwi akhe ame phezu kwezinsika ezintathu: 1. Imodeli yobudlelwano obuhle kanye nochwepheshe. 2. Incazelo yengqondo yokuphambuka kwezocansi (ukungakwazi ukuthanda umuntu wonke). Ukugomela kwesayensi: Ubungqingili akuwona umphumela wokuzikhethela kodwa yisizinda semvelo, kunzima kakhulu ukushintsha futhi kuyingozi ukuzama. Kakade lapha kusho ngamafuphi: 3. Imodeli ehlongozwa ngu-Yuval ayilungile (bheka izihloko emini) futhi ayihambisani nengxoxo lapha. 1. Incazelo yengqondo nayo ayihambisani nengxoxo. 2. Le mibuzo yobungcweti ayibalulekile engxoxweni. Manje ngizochaza imininingwane.
Ngesinye isikhathi ngihlezi e-kollel e-Bnei Brak futhi umfundi weza kimi futhi wabuza ukuthi ingilazi yayiwuketshezi noma iqinile. Ngamtshela ukuthi maqondana nemithetho yengilazi yeShabbat iqinile, nakuba izazi zefiziksi zivame ukuyichaza njengoketshezi lwezidingo zabo zobuchwepheshe. Futhi lo mzekeliso, uma i-psychiatry ichaza ukuhlanekezela ngokocansi njengokungakwazi ukuthanda umuntu wonke - ihlazo labo. Kepha kungani kufanele i-halacha noma isimilo yamukele incazelo yobungcweti futhi iyisebenzise nasezingeni elijwayelekile? Ngaphezu kwalokho, izincazelo azikona ukutholwa okunamandla, ngakho-ke uchwepheshe akananzuzo ngaphezu komuntu ovamile maqondana nazo. Odokotela bengqondo bangakwazi futhi kufanele bachaze imiqondo yabo ngezidingo zomsebenzi, kodwa lokho akuhlangene nombuzo ojwayelekile. UMichel Foucault wabhala ukuthi ukuxilongwa kwengqondo kugcwele ukuqagela kwenani. Naphezu kokuba omunye wabanduleli be-postmodernism emehlweni ami, wayeqinisile ngakho. Nokho, kabili ngosuku ngisho newashi elimile libonisa isikhathi esifanele.
Udokotela wengqondo anganquma kakhulu umsuka wobungqingili. Ingabe inofuzo, imvelo, noma esinye isizinda. Angakwazi ukunquma ukuthi singelashwa yini futhi ngaziphi izindlela, nokuthi iyini imiphumela yokwelashwa ngakunye. Lokhu konke ukuzimisela kochwepheshe, futhi sicabanga ukuthi ulwazi lwesayensi lukhona (futhi ngokuqinisekile aluphelele kuleli cala, okuyinto ngombono wami engagcizelelwa ngokwanele emazwini kaYuval), uchwepheshe angabanikeza izimpendulo. Kodwa umbuzo wokuthi ngabe lokhu ukuphambuka nokuthi kufanele kuphathwe kanjani kuyindaba yencazelo evamile hhayi yokuzimisela kochwepheshe (bheka izihloko ezingenhla).
Amazwana amabili ngaphezulu:
A. Njengochwepheshe omncane wezifo zengqondo, ngiyayingabaza incazelo ephakanyiswe u-Yuval yoshintsho esimweni sengqondo sabasebenza ngengqondo ngobungqingili. Ngokubona kwami, lokhu ngokuyinhloko kuwushintsho kumanani futhi akulona iqiniso lesayensi. Ingxenye ebalulekile yomphakathi namuhla ikholelwa ukuthi lo mkhuba awukona ukuziphatha okubi (ngisho nomncane uyavumelana nalokhu) ngakho-ke awuboni njengokuphambuka. I-Psychiatry lapha idonswa phansi yizindinganiso zomphakathi, hhayi ngenye indlela. Cabanga nge-kleptomania. Ake sicabange ngenjongo yengxoxo ukuthi inemvelaphi yofuzo futhi ayikwazi ukuguqulwa (iguqulwe). Ingabe lokhu kusho ukuthi i-kleptomania ayikona ukuphambuka? Kwenqatshelwe futhi kuyingozi ukweba, ngakho-ke kunengqondo ukuchaza i-kleptomaniac njengehlanekezela. Lokhu kwenzeka ngaphandle kokuthi noma kukhona ukuthambekela kokweba akusho ukuthi umuntu uyeba ngempela (njengoba u-Yuval echaza ngobungqingili), futhi nalapho angeke welashwe futhi unemithombo yofuzo noma yemvelo (njengoba ngangicabanga ngenjongo ingxoxo). Umehluko phakathi kwe-kleptomania nobungqingili ukuthi odokotela bengqondo abaningi namuhla bakholelwa ukuthi kuvunyelwe futhi akunangozi ukuba ubungqingili, kuyilapho ukweba kunqatshelwe futhi kuyingozi emehlweni abo. Kuyasicacela ukuthi lawa angamagugu hhayi amaqiniso.
B. U-Yuval ubhala ukuthi “wonke umuntu wenkolo ofundile” uyazi ukuthi egunjini labagula kakhulu angalala umuntu ofile ngokuphelele onhliziyo yakhe ishaya. Ngicabanga ukuthi ngingumuntu ofunde kakhulu (futhi futhi ngiyakholwa kakhulu), futhi angikwazi ngempela lokho. Ngaphezu kwalokho, ngisho naye ngokwakhe akazi. Ayihlangene nemfundo (yize enkolweni mhlawumbe yebo), intshe ngoba incazelo yokufa nokuphila ijwayelekile hhayi emtholampilo. Udokotela angakwazi ukunquma, uma kunjalo, ukuthi yimiphi imisebenzi ekhona esimweni esinjalo, futhi yiliphi ithuba lokubuyela kulo ekuphileni okuvamile. Kodwa akakwazi ukunquma ukuthi umuntu onjalo uyaphila noma ufile, futhi ngokuqinisekile hhayi ukuthi angakwazi yini ukunikela ngezitho (okuyinto ngokombono wami siqu evumelekile futhi eyisibopho kuye ngisho noma ebhekwa njengomuntu ophilayo. Bheka izihloko emkhakheni we Kt). Konke lokhu kuyimibuzo ebalulekile hhayi eyiqiniso. Odokotela abahlukahlukene abenqabayo ukwamukela lokhu bangenye inkomba yokuthi inhlanganisela yamanani namaqiniso ayiveli kuphela kubantu abavamile.
UProf. Yuval uphendule kulokhu kuwebhusayithi okwengeza impendulo evamile kithi sonke. Impendulo ethize emazwini ami (kanye nakuDkt. Azgad Gould) iphakanyisiwe Kuwebhusayithi yakhe Futhi lolu ulimi lwakhe:
Ngokuhlonipha uRabi uDkt. Michael Avraham
I-Higher Institute yeTorah
Abazithobayo, uRabi Shalom noBracha,
Okokuqala, yazi ukuthi osayine ngezansi uyakwazisa kakhulu wena nomsebenzi wakho. Angikho emhlabeni weTorah ngezinga elingivumela ukuthi ngithokozele umsebenzi wakho weTorah nomsebenzi we-halakhic, kodwa i-neurobiology kanye nefilosofi encane engiyiqondayo kwakwanele ukuba ngiyijabulele kakhulu incwadi yakho ethi "Isayensi Yenkululeko", engicabanga ukuthi umsebenzi wokuqala futhi omuhle wokucabanga, kanye negalelo elikhulu ensimini.
Uma kuqhathaniswa nokuthokozela kwami ​​incwadi yakho, kucace bha empendulweni yakho engagculisi evela ezihlokweni ezithi "aziphambuki". Kungakho ngijabule ngokunye kwentuthuko engizenzele yona lapha, ukuze ngizame ukukukholisa ngokulunga kwamazwi ami, futhi uma kungenjalo ukukholisa, khona-ke okungenani qala ukwakha ibhuloho phakathi kwentaba yakho nentaba yakho. ntaba yami. Ake siqale ngezinto engivumelana nawe:
Ngivumelana nawe kabili (hhayi kabili ngosuku) mayelana noMichelle Foucault. Kokubili mayelana ne-postmodernism, engikholelwa futhi ukuthi umbhalo ongenalutho, futhi ngokuphathelene nokuzimisela kwayo ekuxilongweni kwengqondo, lapho, ngeshwa, eqinisile kakhulu. Kodwa ngiyakholwa, futhi angiqiniseki ukuthi lapha uvumelana nami, ukuthi akunakwenzeka ngenye indlela: kunqunyelwe ukuxilongwa kwengqondo, ngokwemvelo yayo, ukuthi ngeke ikwazi ukuhlukana nokuqagela kwenani, okungenani hhayi. esikhathini esizayo esibonakalayo. Ngakho-ke lokho isazi sefilosofi esingakwazi ukukukhokhela - ukuhlukanisa ukuhlukana okubukhali phakathi kwamagugu namaqiniso, udokotela wengqondo akakwazi ukukukhokhela. Futhi ikakhulukazi akakwazi ukuzikhohlisa yena kanye nomphakathi ukuthi kukhona - noma kungaba khona - ukuhlukana okuphelele kangaka ensimini yakhe. Ngizobuyela kulokho kamuva.
Nami ngiyavumelana nohlaziyo lwenu olubukhali lombuzo wesimo se-halakhic somuntu olele egumbini labagula kakhulu lapho ingqondo yakhe isimile futhi ingasasebenzi, inhliziyo yakhe ishaya, ngize ngafunda okusha ezintweni ozibhale esahlukweni. izihloko ngesihloko empendulweni yakho. Ngaphezu kwalokho: Ngiyajabula ukuthi isiphetho sakho sokugcina - ukuthi kuyisibopho ukunikela ngezitho zale ndoda - kuyefana neyami. Ngethemba ukuthi uzoqhubeka nokusebenzisa ngokunenzuzo isimo sakho kanye nomthelela phakathi kweBnei Torah ukuze uguqule isimo sengqondo sokungazi - ngisho nesokungakholwa - sabanye babaholi be-ultra-Orthodox kanye ne-National-Religious Judaism kulolu daba.
Kodwa ongakwenza mayelana nomehluko phakathi "ophilayo" kanye "nofile", awukwazi, ngokubona kwami, ukwenza mayelana nomehluko phakathi "okuhlanekezelwe" kanye "okungahlanekezelwe." Ngizochaza amazwi ami: Okokuqala, ngokuphambene nalokho okubhalayo, udokotela nokunye indlela yokunquma ukuthi umuntu uyaphila noma ufile. Ngiyazi kuqala lokhu. Lapho ngisebenza emnyangweni weziguli ezilaliswayo njengodokotela onguchwepheshe, ingxenye edabukisayo yomsebenzi wami kwakuwukuthola, ekuqaleni, ukufa kweziguli ezafa ebusuku. Ngisakhumbula, kuze kube namuhla, ubuso obuningi engabumboza ngeshidi ngilungiselela ukufika komsebenzi wasendlini, owafika ezobahambisa ekuqaleni kohambo lwabo lokugcina.
Futhi nokho ngiyabona ukuthi uqinisile uma uthi ukuzimisela kwe-halakhic kokuthi ubani "ophilayo" nokuthi ubani "ofile" kungase kuhluke ekunqumeni kwezokwelapha, futhi akuguquki naphezu kwakho. Kodwa isiphetho esicacile esivela empendulweni yakho, ukuthi incazelo yengqondo yokuchezuka kanye nencazelo yenkolo (futhi ngokuqinisekile incazelo yenhlalonhle-yenkolo) yokuphambuka nayo ayihlobene, ngokombono wami ayibonisi iqiniso.
Ake sithathe i-kleptomania, oyilethe njengecala lokuhlola. I-kleptomania ayikona ukuphambuka. Ingabe ukuphazamiseka kwengqondo. Igama elithi ukuchezuka ligodlwe kudokotela wengqondo, njengasolimini lwasemgwaqweni, kokungajwayelekile, akusho ukuthi okunengekayo, ukuziphatha esimeni socansi. Ngethemba ukuthi awuzami ukusebenzisa izibalo, kanye nenani-engathathi hlangothi, incazelo yokuchezuka kokujwayelekile (i-a.k.a. ukuchezuka okujwayelekile), ukuze wenze kube semthethweni ukungena kwesimo sengqondo senani esibi sobuJuda be-ultra-Orthodox obufakwe ebungqingilini.
I-Psychiatry ayisebenzi nje "ngokuziphatha" kodwa nezimo ezizimele; Njengoba ubhalile, futhi ngiyajabula ukuthi lapha uvumelana nami, i-kleptomaniac akudingeki ukuthi empeleni intshontshe ukuze ibe i-kleptomaniac, futhi ongqingili akudingeki aqambe amanga kowesilisa ukuze abe gay. Kodwa lapha kuphetha isifaniso phakathi komzekeliso kanye lomzekeliso. I-kleptomaniac ilimaza futhi ilimaza abanye ekuziphatheni kwayo, ngakho-ke ukuziphatha kwayo akulungile (hhayi ukuphambuka), futhi umphakathi uvunyelwe ukuvikela ngokumelene nakho. Ngaphezu kwalokho: uma eba izinto ezibalulekile, ukuphazamiseka kwakhe kwengqondo kungase kungamelani naye enkantolo, futhi kuzocatshangelwa kuphela esigabeni sezingxabano zesigwebo. Ngicabanga ukuthi mina nawe sobabili siyavuma ukuthi ongqingili abazona izigebengu, futhi uma bengaqambi amanga kowesilisa - akucaci kimina ukuthi bahluke kanjani kuwo wonke amanye amadoda angamaJuda, nawo abhekana nokuvinjelwa kweTorah ekuvezeni ubulili bawo.
Ngibuyela endabeni yokungakwazi ukuhlukanisa ngokuphelele amanani namaqiniso namaqiniso kudokotela wengqondo. UmKristu ongumKatolika ukholelwa ngokholo oluphelele ukuthi isinkwa senhlanganyelo asithola futhi wasidla phakathi neMisa saba emlonyeni wakhe inyama yeqiniso kaMesiya. Kuwumcabango ongamanga wazo zonke izinhloso nezinhloso, futhi uchezuka encazelweni ye-psychosis ngenxa yenkambiso yezenhlalo negugu - amakhulu ezigidi zabantu akholelwa kuyo. Lesi isibonelo esincane, kodwa isayensi yengqondo, uma kuziwa ekuchazeni, ekuxilongeni nasekwelapheni izenzakalo ezizimele, iphumputha ngokujulile ebumnyameni mayelana nesisekelo sebhayoloji namaqiniso salezi zenzakalo.
Ngingajabula ukukwazi ukubeka umsebenzi wami ezisekelweni ezifanayo nalezi zefiziksi emi phezu kwazo, kodwa ngeke kwenzeke empilweni yami, futhi hleze kungenzeki. Njengoba wazi kangcono kimi, umbuzo oyisisekelo wefilosofi osekelwe kulolu daba, engicabanga ukuthi awunayo impendulo egculisayo njengamanje, umbuzo we-psychophysical causality: ingabe indlela eyodwa noma ezimbili noma ayisebenzi odabeni bonke? Umkhulu wami okhulume naye wabhekana, njengawe, ngombuzo we-psychophysical causality, futhi waze wakholelwa ukuthi akukho futhi kwakungeke kube yisixazululo kuso (Ignorbimus - asazi futhi ngeke sazi). Ngaphandle kokuzenzisa futhi ngaphandle kokuzama ukungena obishini lapha, empeleni ngisekela umbono womfundi wakhe, uProf. Yosef Neumann, owayecabanga ukuthi namuhla akunasixazululo, kodwa kusasa kungenzeka (Ignoramus - asazi, kodwa singazi ngelinye ilanga).
Ekugcineni, ngifuna ukubuya endaweni ephakeme yefilosofi ngiye ezweni elimnyama longqingili benkolo. Ngibhale indaba yami ngilandela amazwi kazakwenu u-Rabbi Levinstein, owaxosha laba bantu abalungile futhi wabadabukisa. Ekupheleni kosuku umbuzo osebenzayo ongithakaselayo, futhi engingatholanga inkomba eqondile nefanelekile empendulweni yakho (futhi ngiyethemba inkomba enjalo), ukuthi ngabe ikhona yini indlela yokuvumela ongqingili benkolo baphile futhi baqale imindeni emiphakathini yenkolo yamaZiyoni. Uma kuziwa kubantu abangaqambi amanga kowesilisa, lokhu ngokombono wami othobekile umbuzo wezenhlalakahle ngaphezu kwe-halakhic. Lapha, ngokubona kwami, wena, mina, kanye nabo bonke abafundi bethu kufanele sikhumbule isisho sikazakwabo, u-Albert Einstein: "Kulula ukuhlephula i-opaque kunokukhipha ubandlululo."
Nansi indlela engisabela ngayo emazwini akhe:
Sawubona Prof. Yuval, Sawubona.
Okokuqala ngokuhlonipha kwami ​​nizijabulele izinombolo zami naze nazwakalisa ukubonga lapha. Akulula neze kimina.
Ngempela, angivumelananga nalokho enikushilo esihlokweni, nakuba ngingenakusho ukuthi angizange ngikujabulele. Njengenjwayelo, izinto zibhalwe kahle futhi ngendlela ecacile nenhle. Futhi nokho, njengoba kushiwo, ngisho nangemva "kokuphela kokuthuthukiswa" (njengoba usho), angivumelani nabo, futhi ngizozama ukuchaza lapha ukuthi kungani.
Uma sivumelana nge-Foucault (ngiqonde iphuzu lesibili), khona-ke sesifinyelele esiphethweni sokuqala esivamile sokuthi ukwelashwa kwengqondo kugcwele ukuqagela kwenani futhi kusekelwe kakhulu kukho. Iphinde ibe nesici esiyiqiniso, kodwa iphuzu elibalulekile cishe ngaso sonke isikhathi libandakanya ukubaluleka kanye nemibuzo yamasiko.
Ngokuvumelana nawe ukuthi kunjalo, angiboni ukuthi usho kanjani ukuthi ubudlelwano phakathi kukarabi nodokotela wengqondo bungaphansi kwemodeli yobudlelwano phakathi kochwepheshe kanye norabi. Noma ngabe i-psychiatry ingakuboni njengokuphambuka, usavuma ukuthi kuyisiphakamiso senani. Pho kungani urabi kufanele akwamukele lokhu njengokuzimisela kochwepheshe? Angakwazi ngempela ukunquma ukuthi uyayithola, kodwa kuyisinqumo sakhe se-halakhic futhi akuhlangene namandla ochwepheshe. Mayelana nemodeli yorabi eqhathaniswa nochwepheshe, usuvele ukhulume kimi empendulweni yami yokuqala Esihlokweni engisinikele endabeni Emini m.
Bese wengeza nokuthi akunakugwenywa (ukuthi abezengqondo bazohlanganisa amanani namaqiniso). Nakuba ngingeyena uchwepheshe kodwa ngisazosho ukuthi angihambisani nakho. Ngilungise uma nginephutha, kodwa isayensi yengqondo yayingagxila emaqinisweni (ngomqondo obanzi, okungukuthi, kuhlanganise nemibono ewachazayo, njengakusayensi yemvelo), futhi akukho okunye. Isibonelo, ubenganeliseka njalo ngokuthi iyini imvelaphi yobungqingili (kimi lokhu kuhlanganisa nokuqagela okusendle kwe-psychoanalytic njengoba ufisa, inqobo nje uma lezi kuyimibono ezama ukuchaza lesi simo ngokwaso ngaphandle kwenkokhiso), ukuthi kwenzeka kanjani. ithuthukisa (ibid.), Lapho ivame, ukuthi futhi kanjani Lokhu kungashintshwa, futhi iyini intengo yanoma yiluphi uhlobo loshintsho (noma "ukuguqulwa" hhayi kithi) okunye nokunye. Lena imibuzo ephathelene namaqiniso nokuchazwa kwawo, ngakho-ke imibuzo yesayensi neyochwepheshe esemthethweni. Kimina kubonakala sengathi yonke le mibuzo ayikhokhiswanga nganoma iyiphi inkokhiso yenani. Ngakolunye uhlangothi, umbuzo wokuthi ngabe kuwukuchezuka noma cha, kumele uyekele emphakathini kanye nawo wonke umuntu okuwo ukuthi anqume.
Yebo uma futhi wenza umqondo "wokuchezuka" iqiniso lami, njengokuphambuka esimisweni sezibalo ("incazelo yezibalo engathathi hlangothi", ngolimi lwakho) khona-ke i-psychiatry inganquma lokhu ngobuchwepheshe, kodwa usuvele uvumile emazwini akho lapha ukuthi akunjalo. Ngakolunye uhlangothi, ubuya lapha futhi uzolungisa usizo lwami egameni lokuchezuka, futhi ngicabanga ukuthi ngokwenza kanjalo uzama futhi ukubiza incazelo yengqondo ukuze isetshenziswe nsuku zonke. Ekusetshenzisweni okuvamile ezifundeni zethu ukuchezuka kunamandla (okuzalwa?) Ukuthambekela esenzweni sobugebengu (njengesibonelo se-kleptomania esivumelene ngayo, ngaphandle kwegama elithi "ukuchezuka"). Enye indlela noma enye, lokhu kuyincazelo, yingakho uRabi Levinstein kanye nomuntu wami omncane (okude kakhulu nemibono yakhe ezintweni eziningi) bavuma ukuthi ayikho indawo yokuthatha igunya lochwepheshe phezu kwayo. Kuyini okuqukethwe okuphathekayo komqondo, futhi ingabe kuhlanganisa ubungqingili, mina ngokwami ​​ngivame ukungacabangi (ngoba ngokombono wami ukuchezuka kuwumkhuba wokuziphatha okubi, hhayi ukuthambekela ezenzweni zobugebengu ngomqondo wenkolo). Ngicabanga ukuthi umbono kaRabi Levinstein unguyebo (ngoba ngokombono wakhe ukuthambekela ezenzweni zobugebengu ngomqondo wenkolo nakho kuwukuphambuka, mhlawumbe ngenxa yokuthi uhlonza i-halakhah ngokuziphatha, engiyenqaba ngokuqinile futhi ngaleyo ndlela ngijoyine i-tangle ephuzile).
Ngezansi, angisiboni isizathu emhlabeni sokuthi i-American Psychiatric Association noma enye inhlangano yobungcweti inqumele thina sonke ukuthi yini okufanele ilashwe nokuthi yini okungafanele yelashwe, nokuthi yini ukuphambuka nokungafanele. Lokhu kufanele kushiyelwe emphakathini, kumuntu ngamunye kuye ngokwakhe, futhi kunjalo nakudokotela wakhe wengqondo (ngokungafani nenhlangano yabo yobungcweti). Okusho ukuthi: umphakathi uzonquma uma kukhona okulimazayo kwabanye (i-kleptomania, i-pedophilia, njll.), bese-ke kufanele ilashwe ngisho noma isiguli singazange siveze isifiso sayo (ezimweni ezimbi kakhulu ngokwanele). Ezimweni lapho kungekho ukulimala komphakathi, umuntu ngokwakhe uzonquma ukuthi uyayidinga / ufuna ukwelashwa noma cha. Futhi-ke udokotela wengqondo aphendukela kuye (hhayi usoseshini) angasho ukuthi akazimisele ukuluphatha lolu daba ngenxa yezimiso zakhe. Kunoma yikuphi, angiboni kungenasikhala sezinqumo ezihlangene zenhlangano yochwepheshe ezindabeni ezinjalo.
Ngicabanga ukuthi lesi sithombe siphinde sicacise ukuthi kungani ngokubona kwami ​​kukhona nakanjani futhi kuwukuphunyuka ekwethuleni ubukhulu benani kudokotela wengqondo. Ngokuqonda kwami ​​​​okungcono kakhulu kule modeli siyakugwema lokhu, ngakho-ke ngokubona kwami ​​udokotela wengqondo angakwazi ukwenza umehluko phakathi kwamagugu namaqiniso, njengesazi sefilosofi noma isazi sefilosofi. Njengoba ngingeyena uchwepheshe, angingabazi ukuthi kungenzeka iphutha kulawa mazwi, futhi ngingajabula uma ungangiqondisa.
Kunjalo nangesimo somuntu olele egumbini labagula kakhulu lapho inhliziyo yakhe ishaya nengqondo yakhe ingasasebenzi. Abaphikisi ngokubona kwami, emehlweni ami abangalungile futhi abalimazayo, "abangazi," emazwini akho. Phela, lawa akuwona amaqiniso noma ulwazi lwanoma yiluphi uhlobo, ngakho-ke ngiyaphikisana nokusetshenziswa kwaleli gama maqondana nawo. Ngokubona kwami ​​abenzi kahle ngokokuziphatha yingakho beyingozi. Futhi, kubaluleke kakhulu kimina ukuthi ngiqaphele ngokuhlukanisa phakathi kwamagugu namaqiniso. Impela ngenxa yalesi sizathu udokotela akanalo inani elengeziwe maqondana nalo mbuzo.
Le nto eniyishilo emazwini enu lapha ukuthi empeleni lesi sitatimende sinikezwa odokotela ayilutho ngaphandle kwethimba labaphathi, futhi akukho okunye. Lokhu akukhona ukuzimisela kochwepheshe. Ungahlanganisi amanani namaqiniso futhi. Empeleni dlulisela isinqumo sokunquma ukufa kodokotela (njengoba uchaze ngawe esigqokweni sakho njengodokotela), kodwa lokho akusho ukuthi kuyisinqumo esiyiqiniso-sochwepheshe. Lokhu kwenzelwa ukunethezeka nokusebenza kahle kuphela, futhi empeleni ukudlulisela amandla esishayamthetho kudokotela ukuze afinyeze futhi ahlele inqubo.Ukunquma ukufa, nakuba kuwukunquma inani). Ukunquma ukuthi yimiphi imisebenzi lowo muntu anayo esimweni esinjalo nokuthi yimaphi amathuba akhe okubuyela ekuphileni kuyisinqumo sochwepheshe. Isinqumo sokuthi esimweni esinjalo uthathwa njengofile - yisinqumo senani elimsulwa. Akahlangene namaqiniso. Ngokuphambene nalokho okubhalile, isinqumo se-halakhic mayelana nokuphila nokufa "asihlukile esinqumweni sezokwelapha." Intshe ukuthi ayikho into ebizwa ngokuthi "isinqumo sezokwelapha" mayelana nokuphila noma ukufa. Lesi yisinqumo senani elimsulwa (njengoba kuchazwe ngenhla). Kuyiqiniso ngempela ukuthi isinqumo esingokomthetho singahluka kwese-halakhic, njengoba lezi ezimbili ziyizigaba ezijwayelekile (kunokuba zibe yiqiniso).
Sivumelana ngokugcwele ukuthi izitabane azizona izigebengu. Kodwa ngokuqinisekile asivumi ukuthi ongqingili (abasebenzisa ngokoqobo ukuthambekela kwabo) abazona izigebengu. Siyavuma ukuthi izenzo zabo azilona icala, okungukuthi, icala lokuziphatha (ngasho ukuthi kukhona abasekamu lenkolo abacabanga okuhlukile, angiyena omunye wabo), njengoba bengalimazi abanye. Kodwa i-halakhic neTorah yizigebengu, ngakho-ke ngokombono wenkolo ne-halakhic bayizigebengu ngomqondo ofanayo wombulali noma umphangi (kodwa futhi ziyizigebengu zokuziphatha). Izinga lecala lingenye indaba nakanjani. Yilapho izinga lokuzikhethela nokulawula abanalo lingena khona kanye nezinga lokuqaphela ukuthi lokhu kuvinjelwa (umuntu wezwe akakubheki lokhu njengesenzo esingekho emthethweni vele). Njenge-kleptomaniac phambi kwesela elivamile.
Kubalulekile kimina ukuqaphela ukuthi mayelana nokuphathwa kwezitabane ngikhululekile nakakhulu kunalokho obulindele ukuthi ngibe yikho. Kimina, nalabo abaluqonda kahle lolu daba banelungelo lokuphathwa ngendlela evamile emphakathini (ngaphandle uma ewunyakazisa futhi ewushumayeza, okuyintshumayelo yobuhlongandlebe ngokomthetho). Umuntu oyisigebengu endaweni yakhe kanye nangasese uyilungu elisemthethweni lomphakathi, ikakhulukazi uma esesimweni esinzima kakhulu ukubhekana naso. Ngike ngabhala ngalokhu kakhulu esikhathini esidlule, futhi ngikhululeke ukubona isibonelo Lapha futhi Lapha. Uzibuze ukuthi kungani izinto zingavelanga empendulweni yami ephephandabeni, lokhu kungenxa yokuthi ngiphawule lapho kuphela ngezimpikiswano oziphakamisile endabeni yakho hhayi ngengqikithi yodaba. Uma ubona isiqalo sempendulo yami ende kukholamu okwedlule Isizinda sami, uzothola ukuthi ngibhale ngokusobala ukuthi ngivumelana neziphetho zakho eziningi ezisebenzayo. Ngebhadi uhlelo aluzange lungivumele ukuthi ngelule impendulo ephephandabeni. Kungakho ngenze "intuthuko" kumakholomu amabili okugcina lapha esizeni nasengxoxweni eyalandela (ezingxoxweni).
Futhi ngizophetha nge-mimara oyicaphune ngokuthi “uzakwethu”, njengoba usho (nginamahloni ngisho nokusho igama lami ngokuzumayo nomdondoshiya wesayensi onjalo). Kunzima ngempela ukushintsha noma ukuqeda ukucwasa. Kodwa umbuzo omkhulu uwukuthi ingabe endabeni ka-Didan lokhu kuwukubandlulula ngempela, noma ukuthi indawo yenani ehlukile (yonke indawo yenani, kuhlanganise neyakho kanye neyami, iwukubandlulula ngomqondo othile). Isimo sengqondo esibi kanye nesimo senhlalo emphakathini wezenkolo ngobungqingili (okuyinto ngokubona kwami ​​engahlangene nokwenqatshelwa, njengoba ukwenqatshelwa kwezobuciko ngeShabbat akubambi kangako futhi akukutholi ukuphathwa okunjalo) ngempela kuwubandlululo ngokombono wami (ngoba Ukuqagela okuyiqiniso kwenziwa, hhayi amanani kuphela). Kodwa wona kanye umbono wobungqingili njengokwenqatshelwa akukona ukucwasa kodwa kuyinkambiso ye-halakhic (ngisho noma kuyishwa ngombono wami). Isimo sengqondo ezinkambisweni ezinjalo (njenganoma iyiphi inkambiso) Yebo sincike ezinkolelweni zomunye nomunye wethu. Mina ngokwami ​​nginokholo kumnikezeli weTorah, ukuthi uma enqabela mhlawumbe kukhona okuyinkinga ngakho (okuyinto ebumpofu bami engingazange ngiyiqaphele). Ngibeka ingqondo yami emyalweni wakhe. Kodwa njengoba lena kuyimibuzo yokholo, angifuni ukuba abezengqondo bathathe izikhundla, futhi ngokuqinisekile kungabi eziqinile, ngayo (njengoba nje kwenzekani ngesidlo emilonyeni yabazala bethu abangamaKhatholika), futhi sesibuyela emuva kungenzeka futhi udinga ukunqamula i-psychiatry kusuka kuzinhlaka. Futhi ngalokho orabi bethu sebeshilo (ibid., Ibid.): “Nika uKesari okukaKesari…
 Mangisho ukuthi kanye nezindatshana ezimbili zikaYoav Sorek, leyo eshicilelwe esithasiselweni esifanayo emasontweni amabili edlule naleyo eshicilelwe kusizindalwazi sezengezo seShabbat (p. Bheka), lena ingxoxo ehlakaniphe kakhulu nefanele eyaziwa nami emaphephandabeni noma nhlobo ngale ndaba. Ngokuhlonishwa kwami ​​ukuba nengxenye kukho.
Ekuchezukeni, Ubuchwepheshe kanye Namagugu - Impendulo ku-athikili kaProf. Yoram Yuval, "Ayiphambuki", Shabbat P. P. Akev Supplement (Ikholomu 25)
'UHefza' weTorah - impendulo esihlokweni sikaRabbi Yehuda Rak
I-Halacha neqiniso - buyini ubuchwepheshe be-halakhic
8 Imicabango ethi “Ekuphambukeni, Ubuchwepheshe kanye Namagugu - Impendulo ku-athikili kaProf. Yoram Yuval, “Ayiphambuki”, Shabbat P. P. Akef - Ikholomu Eqhubekayo (Ikholomu 26)”
30 Tishrei 10 - 2016/12/31 ngo-XNUMX:XNUMX
Okokuqala, ngithanda ukuveza ukuthi ngijabule kakhulu futhi ngafunda ekubhaleni nasenkulumweni, ukujula kwayo ngisho neziphetho enivumelana ngazo nobabili ngokomgomo.
Nokho, namanje angizizwa ngiyaqonda ukuthi kungani uphikelela ekuchazeni ukuchezuka njengokuthambekela kobuhlongandlebe hhayi nje ukuchezuka kulokho okujwayelekile? Izinga lokuchezuka kokujwayelekile okudinga ukungenelela noma ukwelashwa liyigugu ngempela, kodwa kona kanye ukuchezuka kokujwayelekile kusemthethweni.
Ngiyaxolisa ngokubuyisela uFoucault enkulumweni, kodwa kwethi The Madness of the Age of Reason, uFoucault ukhulume nalokho futhi ngiyaqonda ukuthi sizofinyelela eziphethweni ezifanayo kanye nendikimba efanayo yokuhlukanisa phakathi kwamaqiniso (kona kanye ukuchezuka ejikeni elivamile) kanye namanani (sonke siyaphambuka Noma ukwenza ikhathalogi kubalulekile)
Sawubona ophikisana naye.
Asikho isithiyo ekuchazeni ukuchezuka ngale ndlela. Izincazelo ziyindaba yakho. Kodwa ngicabanga ukuthi lena akuyona incazelo eyamukelekile futhi ngokuqinisekile akuyona into uRabi Levinstein ayehlosile futhi esikhuluma ngayo lapha. Ngakho-ke, thina (u-Yoram Yuval kanye nami) sivumile ukuthi singayichazi ngendlela yezibalo nengathathi hlangothi. Ekusetshenzisweni kwansuku zonke "ukuchezuka" ibinzana elinencazelo ecacile ephikisayo. Ngokusikisela kwakho, uRabi Levinstein wamane washo into engasho lutho futhi engenamsebenzi walutho, kungani kufanele kuxoxwe ngakho?! Akunakuphikiswa ukuthi ubungqingili bangempela buveza idlanzana labantu. Inkulumo-mpikiswano (no-Rabbi Levinstein) imayelana nokuphathwa kwayo okufanele (nalapha futhi u-Yuval nami siyavuma, ngaphandle kwamagama kanye nokufaneleka kwesikhulu esigunyaziwe ukuze kuxoxwe). Ngandlela thize, zonke izingxabano lapha zisendizeni yenani hhayi eyiqiniso-yezibalo.
Angizange ngikuqonde ukuphawula kwakho ngeFoucault. Phela, thina ngokwethu sibuyisele uFoucault enkulumweni (ngemuva kokuvumelana ngesimo sengqondo esibi esivamile ngakho), ngoba nakhu uqinisile ngempela (iwashi elimile, njll.). Sobabili savumelana nesitatimende sikaFoucault (encwadini oyishilo) sokuthi ukuxilongwa kwengqondo kusekelwe entweni nasekucabangeni kwamasiko. Kodwa ngicabanga ukuthi yingakho nje udokotela wengqondo engakwazi ukugqoka isigqoko sakhe sobuchwepheshe engxabanweni lapha (phela, lezi zingamagugu hhayi amaqiniso).
Lokhu (futhi lokhu kuphela) kuyimpikiswano phakathi kwethu njengamanje. Inkulumompikiswano efanayo ngokuphelele imayelana nokufaneleka kwegunya lochwepheshe likadokotela mayelana nokunquma isikhathi sokufa. Kodwa lokhu kuyimpikiswano efanayo ngokwayo.
Inkinga yokuziphatha nayo yonke imikhawulo yokulala nezihlobo, ukuthi umuntu akagcini nje ukona kodwa usiza futhi aqinise umlingani wakhe ecaleni.
Lapho ubudlelwano obunqatshelwe busungulwa futhi bubonakala kwabaningi ngaphandle kwamahloni - khona-ke ubukhulu besibonelo esibi kwenezelwa kwabaningi kanye nesitatimende somphakathi sokuthi lokhu kuvunyelwe, isitatimende esinomphumela olimazayo kubafana abasasesimweni ukungabaza, futhi isibonelo esibi singaphazamisa ukuvinjelwa.
Wonke u-Israyeli uhlangene, futhi izenzo zomuntu ngamunye zinethonya kuwo wonke umthetho. Kwangathi sonke singaba nelungelo lokungcweliswa futhi sithuthukiswe ngamunye ngamunye kulokho adinga ukuthuthukiswa, kanjalo abuse umhlaba wonke ngendlela efanele.
Ngiyabonga, S.C. I-Levinger
Ngokwenza kanjalo uphendule noma yikuphi ukuvinjelwa kwanoma yiluphi uhlobo kwaba icala lokuziphatha. Phela, ngokomfanekiso wembobo emkhunjini, ngisho namacala angabandakanyi omunye umuntu empeleni athinta isiphetho sakhe. Ngakho ngokwalokhu yonke iTorah ingukuziphatha.
Uma ungachazi ukuthi ukuvinjelwa kukodwa kuwukuziphatha, akuwenzi umqondo ukukhuluma ngokuthi kuwukuziphatha ngenxa yobukhulu bawo bokwehluleka nokulimala. Lena yi-tribal tautology.
30 Tishrei 10 - 2016/12/34 ngo-XNUMX:XNUMX
Ku-SD XNUMX Elul XNUMX
KuRabi u-Avraham Neru - Sawubona,
Ngempela, zonke iziphambeko zentando kaNkulunkulu ziwukuziphatha okubi, sikweleta udumo loMdali, kokubili ekubeni ‘ngumnikazi wendlu’ emhlabeni wonke, nasekubongeni wonke umusa wakhe anathi.
Ngasikhathi sinye, ukuvinjelwa okuningana kokulala kwezihlobo, okusiphakamisa ekwakheni impilo yomndeni enempilo, elawulwa hhayi nje ngomzwelo wemvelo, kodwa namagugu othando, ukwethembeka nomusa, ngenxa yalokho ubaba nomama bazuzisa omunye nomunye futhi batshale okungapheli. uthando nokuzinikela.
Kodwa ngaphandle kodumo loMdali, kuphinde kube nesibopho esiyisisekelo sokuhlonipha abazali. Kungakanani ukuphelelwa ithemba okubangelwa abazali lapho ingane yabo iwela ekuphileni okunqunyelwe ngokuphelele, ukuphila lapho kungekho khona ithuba lokusungula ‘Isizukulwane Esibusisiwe Esibusisiwe’ esiyoqhubeka nendlela yobuJuda?
Umuntu owaziyo ukuthi abazali bakhe batshale imali engakanani kuye nokuthi banikela ngezimpilo zabo kangakanani ukuze bamlethe emhlabeni ukuze bamkhulise futhi bamfundise - ubophekile ukuba enze yonke imizamo ukuze aphume lapho awela khona.
Njengoba nje abazali bevame ukubhekana nokwelashwa okunzima, ngokomzimba nangokwengqondo, ukuba babe nelungelo lokugona ingane, futhi uma bengaphumeleli kulokhu kwelashwa, zama enye indlela yokwelapha, futhi ungayeki - manje sekuyingane. owayenemali efanayo yokutshala kubazali bakhe. Intombazane engumJuda'. Lokhu ubuncane angakwazi ukubakhokhela ngakho konke okuhle abakwenzela yena.
Ngisho nabelaphi abangenaso isiqiniseko sokuthi kukhona ongashintsha, bathi ikhona impumelelo. Noma ngabe ukuthambekela kobungqingili kunamandla futhi kuhlukile, okuyinto ke enzima kakhulu ukuyishintsha - kusho uDkt. Zvi Mozes (esihlokweni sakhe esithi, 'Ingabe Ukwelashwa Kwezindlela Zokubuyisela Kusebenza kahle ngokwengqondo', kusizindalwazi 'soMpande'), ukuthi abantu bayasebenza kakhulu. uzimisele futhi ube nokholo oluqinile, ungaqala umndeni, ngosizo lokunakekelwa okufanele kochwepheshe.
Ukutholwa nokutholwa, ngaphandle kokuyixazululi inkinga yokwenqatshelwa, kuhilela ukudabuka kubazali ingane eyathathwa kubo. Ukwanda kwesidingo sokutholwa kwemibhangqwana yobulili obufanayo nakanjani kuyoholela enkambisweni yezinsizakalo zezenhlalakahle yokwandisa 'impahla' ngokusebenzisa ukutholwa kwengane ngokweqile esikhundleni sokulwela ukushiya ingane ezandleni zabazali bayo.
Ikakhulukazi 'i-surrogacy' iwukuxhashazwa kosizi olubi lwemindeni. Akekho owesifazane onengqondo oyodlula ekuhluphekeni kokukhulelwa nokubeletha, ukuze umntwana anikezwe abantu abangabazi, kodwa kunalokho usekucindezelekeni okubi ngokwezimali noma ngokwengqondo, futhi kwazi bani uma izinhlangano zobugebengu nemibuso ekhohlakele ayihili?
Njengoba ngibhale, konke lokhu kungase kube yiqiniso kodwa nokho kuyimpikiswano engabalulekile engxoxweni. Umbuzo uwukuthi isiphi isimo sokuvinjelwa ngokwazo, hhayi ukuthi zikhona yini izici zokuziphatha ezihambisanayo.
Ngaphandle kwalokho kukhona amanothi emzimbeni wezinto:
NguMdali owadala umuntu waba nokuthambekela kwakhe. Angiqiniseki ukuthi ngibona isibopho sokuziphatha kumuntu sokushintsha lokho.
2. Ukukhungatheka kwabazali kungase kube khona, kodwa kungase kube nezimo lapho kungekho khona. Kuthiwani-ke? Ingabe uyoba nomthwalo wemfanelo wokuziphatha okuhle? Ngaphandle kwalokho, nakuba ngingakabhekanga kodwa ngicabanga ukuthi kunezithandani ezinjalo ezikhulisa izingane eziqapha amathuna. Ngicabanga ukuthi "akukho ithuba" ibinzana elinamandla kakhulu.
3. Umuntu akazange "awe" kodwa "wabanjwa."
4. Zonke lezi zingxabano zikhuluma ngomsebenzi wokushintsha (uma kungenzeka), kodwa azikhombi inkinga yokuziphatha esenzweni.
5. Akudingeki ukuthi umuntu ashintshe indlela yakhe yokuphila ngoba ihlupha abazali bakhe. Kuyaziwa kuRiki eyacashunwa kuRama Yod ukuthi indodana akudingeki ilalele abazali bayo lapho ikhetha umngane womshado, futhi nganaba ngalokhu ezihlokweni zami zokuhlonipha abazali.
6. Baningi abelaphi ababika ukwehluleka kanye nomonakalo omkhulu. Angizange ngingene embuzweni wokuthi ngabe ukwelashwa ngeke kusebenze, kodwa usichaze ngendlela ebuhlungu kakhulu. Imfuneko yokuthi umuntu athathe izingozi ezinjalo kufanele ibe ngesisekelo esiqinile. Futhi futhi, ezingeni lezenkolo ngokuqinisekile kunesidingo esinjalo, kodwa ukukubona njengesibopho sokuziphatha ngiyangabaza kakhulu. Akukho ukubonga okuphoqelela umuntu ukuba angene ekuhluphekeni okubi kangaka nasezingozini zengqondo. Ukuthi abazali bazongena ezindleleni zokuguqula ezizoshintsha izingqondo zabo futhi baqede ukukhungatheka, kulula kakhulu futhi kufiseleka kakhulu (ukuziphatha, hhayi i-halakhic).
7. Ukuphawula kokugcina kuyincazelo yohlangothi olulodwa futhi echemile (futhi ngisebenzisa ulimi olumnene kakhulu). Kuyakucacela ukuthi ukube ubungaphikisani ngempela nalesi simo ubungeke usibone kanjalo. I-Surrogacy yisivumelwano phakathi kwabantu abadala. Futhi noma yini engase ivele kuyo, umuntu kufanele alwele futhi ayivimbele. Ayibambezeli isenzo uqobo. Ukupha abantu abampofu kungabangela nokuthi abantu baphelelwe imali futhi bangase bantshontshe. U-Yigal Amir kuthiwa unenkolelo engokwenkolo engaholela ekubulaleni nasezenzweni ezeqisayo. Kungakho kufanele kuyekwe ukukholwa kwenkolo?
Njengomthetho, lapho uphakamisa zonke izinhlobo zezingxabano futhi ngesizathu esithile wonke umuntu uya endaweni yokugcina endaweni efanayo, ngingasola futhi ngihlole kabusha ukwahlulela kwami.
Ngaphandle kokungena engxoxweni enemininingwane yawo wonke amaphuzu owaphakamisile - ngizokwenza ukuphawula okukodwa kuphela mayelana nezingozi okuxoxwe ngazo ekwelashweni kokuguqula.
Okokuqala nje, umuntu kufanele aqonde ukuthi akuyona yonke imithi enikezwayo efanele, futhi kunemithi yokwelapha engase ifanele umuntu futhi ingalimaza omunye, njengezidakamizwa, lapho okusizayo kuletha omunye emasangweni okufa, njengoba kwezokwelapha konke kufanele kwenziwe ngomunye uchwepheshe wezengqondo Ukuxilongwa ngokucophelela nokulungiswa ngokucophelela kohlobo lokwelashwa kumuntu.
Okwesibili, umuntu kufanele aqaphele ukuthi isayensi iphumputha ebumnyameni uma kukhulunywa ngayo yonke indaba yobungqingili (ngendlela, ingxenye enkulu yobumnyama ingeyokuzithandela, ivimba ngokucophelela noma yimuphi umzamo wokuthola indlela yokuphuma, ngoba kakhulu isipiliyoni siwukuhlubuka nokuba semthethweni kobunikazi bobungqingili).
Enye yezingozi ezinkulu ezibangelwa imizamo yokwelapha ukwesaba ukuphelelwa ithemba okuphelele ngenxa yokuhluleka komzamo wokwelapha. Kodwa-ke, uma wazi kusengaphambili ukuthi lezi zindlela zokwelapha ezintsha nezokuhlola - izinga lokulindela lilinganiselwe kakhulu, futhi ngokufanele ukudumazeka kokwehluleka akumehlisi umuntu. Futhi uqonde ukuthi lokho 'okungahambanga' okwamanje ngale ndlela, kungase kuphumelele kusasa ngendlela ehluke kancane, 'futhi uma kungenjalo kusasa ke ngakusasa kusasa' 🙂
Ngakolunye uhlangothi, umuntu kufanele aqale kusukela ekuqaleni kokukholelwa ukuthi uNkulunkulu ubeke inselelo enkulu esintwini ukuthola ikhambi lalokhu kuthambekela okuphambene neTorah. Ngakolunye uhlangothi, ukwazi ukuthi indlela ezayo yinde futhi asikasitholi isisombululo esicacile.
Kunjalo kuzo zonke izinkinga zesintu, lapho silwela ukuthola ikhambi - sezithuthukile. Ngezinye izikhathi amashumi eminyaka adlula, ngezinye izikhathi amakhulu, nangaphezulu, kodwa nokho ungalahli ithemba futhi ude futhi uqhubeke nokusesha kuzo zonke izindawo ezingase zibe khona, kuze kungazelelwe kufike ukuphumelela.
Okokuqala, lena imibiko evela kochwepheshe bezengqondo.
Okwesibili, uma nje bengakayitholi imishanguzo futhi yonke into isenkungwini njengoba usho, pho ulindeleni endodeni? Ukuziphatha kahle futhi ungabi gay ngaphandle kokwelashwa okusebenzayo?
A. Bheka izixazululo.
Ukubonisana nochwepheshe nokufunda izincwadi zochwepheshe kungalethela umuntu ulwazi olusha ngobuntu bakhe nezimbangela zenkinga yakhe, angathola kuzo izixazululo ezintsha eyedwa, mhlawumbe ngisho neziqondiso ochwepheshe abangazange bazicabange.
B. Yenza ubunzima kube inselele.
Njengoba nje abantu bejabulela ukuzama ukudalula inkinga engacacile ku-Gemara noma 'Emaphethelweni'. Lapha umfana wathola inselele ethakazelisayo - ukwambula imfumbe yempilo yakhe. Zibuze ukuthi yini evusa uthando nezinkanuko zakhe nokuthi yini ezizolisa? Thola ukuthi yiziphi izimfanelo ezivusa uthando ngontanga yakhe? Futhi mhlawumbe kukhona nowesifazane onezimfanelo ezinjalo ezingase zivuse uthando lwakhe futhi kamuva mhlawumbe aze ancibilike ekukhangweni kobulili 'okungaphandle kobulili'.
okwesithathu. Futhi thuthukisa imizwa ethile yozwelo maqondana 'nezindawo eziqondile'
Labo ababhekana nokuhlangenwe nakho okunzima okungabekezeleleki kokuhamba emgwaqeni lapho njalo behlangabezwa khona nabesifazane abagqoka zonke, noma abangagqoki, beklanyelwe ukushukumisa umzwelo wemvelo walabo abadlula ngendlela.
D. Ukwazi ukuthi 'angazihlanganisa kanjani' kuyo yonke impumelelo, ngisho nencane futhi ingxenye.
Ukucabanga ukuthi uMdali wakhe ujabula kanjani ngayo yonke impumelelo, futhi kukho konke ukwenqaba umzwelo ongokwemvelo. Izojabulela ekuqaleni ukwenqatshwa komzwelo amahora ambalwa; Kamuva izinsuku ezimbalwa, futhi kamuva ngaphezu kwalokho. Njengoba nje umzwelo omubi uza ngezikhathi ezithile, uqala kancane futhi uqhubeke nokuningi, kanjalo 'ngezinga elikhulu' umuzwa wemvelo omuhle - uyaqhubeka kuze kube namuhla!
uNkulunkulu. Ukuze uzibandakanye ezintweni ezithakazelisayo.
Ukufunda, umsebenzi, umculo, umsebenzi wokuzithandela nokunye. Akusikho lokhu uFaro inkosi yaseGibithe asifundisa khona, ethi: ‘Umsebenzi mawuhloniphe abantu, ungabasindisi ekuqambeni amanga,’ nangokungafani naborabi bethu abasifundisa:
futhi. Ungagxili 'enkingeni' njalo.
Yiqiniso, 'inkinga' iba 'ubunikazi'. Qonda ukuthi yilowo nalowo unezinkanuko zakhe futhi uyawa, futhi ngokuphambene 'ebuhleni obuningi' iziqongo nempumelelo ziningi. Njengoba nje i-Egypt imayelana nokwehluleka, umuntu kufanele ajabule izikhathi eziningana ngempumelelo yempilo kanye nezenzo ezinhle, okuthi ngoba ziza ngosizi nobunzima, ziyigugu kakhulu endaweni.
P. 'Ngokuba intokozo kaNkulunkulu ingamandla enu'.
Lapho umuntu ezwa kakhulu ubukhona bukaNkulunkulu emhlabeni - kuba mkhulu injabulo kuye. ‘Ngiyicelile iNkosi phambi kwami ​​njalo, ngokuba angiyikuwa ngakwesokunene, nanjengoba abalandeli babuza bathi: ‘Ngokuba niyakuphuma ngokujabula’—ngokujabula. Ukuhlanganyela noNkulunkulu konke ukunyakaza kwempilo, ekuvumeni konke okuhle nokucela abalahlekile, kumuntu ngokwakhe kanye nomphakathi wonke. Lapho usondela ekuphileni ngenjabulo nokukhanya - uphonsa zonke izithiyo.
Lezi ngezinye zezinto eziyisisekelo zokubhekana nesimo ngobuqhawe, futhi cishe noma ubani angathola kokuhlangenwe nakho kwakhe nokuhlangenwe nakho kwabanye iseluleko esihle esengeziwe, ‘Yipha abahlakaniphileyo uhlakaniphe ngokwengeziwe’.
Sanibonani. Angizange ngivumelane nomusho owodwa wakho. Kodwa lapho ngiqala ukusabela kuzo (ukuxubana okuphindaphindiwe phakathi kokuziphatha ne-halakhah, umbono osonteke ngokuphelele wokuziphatha, nokunye nokunye), ngabona ngesinye isikhathi ukuthi lokhu kwakungekhona ukungezwani. Izinto ziyaxaka nje. Uma uzongivumela, ngicabanga ukuthi indaba elandelayo, engake ngayizwa kuRabbi Shalom Shevdron, yenza iphuzu licace kakhulu. Uthe uke wabona umfana ewela emgwaqweni walimala, wamqukula wabe esegijima ebheke esibhedlela. Kuyo yonke indlela, abantu ababevela emafasiteleni nabadlulayo babembingelela, njengokuthi "Rabbi Shalom, umuthi ophelele" (ngesi-Yiddish, kunjalo). Futhi ngakho wagijima wagijima futhi wonke umuntu wafisa. Emva kwemizuzu emingaki abone phambi kwakhe owesifazane esondela kuye ekude nangempela naye amemeze njengabo bonke "Rabbi Shalom, philisa ngokuphelele." Asondele kuye kancane izwi lakhe libe buthaka. Ekugcineni lapho ebona ukuthi kwakungubani (= indodana yakhe, kunjalo) waqala ukuklabalasa ngokwethuka. Ngalesi sikhathi izifiso zakhe nezeluleko zase ziphelile. Ngokuhunyushwa kwamahhala: Ngake ngabona indoda ihlupheka impilo yayo yonke ngenxa yokukhubazeka kokuzalwa. Kukho konke ukuphila kwakhe njengoba ehamba kakhulu ngaphansi komthwalo wakhe wonke umuntu wathi kuye, "Kumelwe wenze ubunzima bube inselele," noma "Thola ukuqonda ngobuntu bakho." Abanye baze bamnike izeluleko zamahhala: "Kusukela ebunzimeni kuzokwakhiwa." Ucashunwe ethi “Finals from villages”. Ngeza kukho "ukwazi ukuzincoma ngayo yonke impumelelo, ngisho nengxenye." Abanye baze bafike bamazise: "Umuzwa wokusihawukela ukuthi asihlupheki futhi asizange sihlupheke ngokuhlushwa isobho" (= yeka injabulo onayo!). Noma "Zibandakanye ezintweni ezithokozisayo, esikhundleni sokuhlala ucwile enkingeni." Futhi-ke, yiqiniso, "injabulo kaNkulunkulu inamandla." UMehadrin waseMehadrin angangeza lapha: “Yiqiniso, cishe akekho ophumelela ngempela, kodwa ngizwile ukuthi emiqulwini yolwandle kukhona abathatha amakhulu egolide emiholweni yabo kanye neziguli (uma benikezwe inhlonipho yeqiniso vele futhi. uma beye kochwepheshe beqiniso kunjalo) yebo baphumelele. UNkulunkulu asize uRabi Shalom.” Angazi kahle ukuthi ubungazizwa kanjani ukube ubusesimweni esifana nalesi futhi kukhona ozokulethela zonke lezi zeluleko ezinhle. Ngiyazi ukuthi ngingazizwa kanjani. Uqedile futhi wathi wonke umuntu kokuhlangenwe nakho kwakhe angathola izeluleko ezinhle ezengeziwe. Ngikutshela iseluleko esihle kuphela engisithola ekuhlangenwe nakho kwami ​​​​ngokuphathelene nesimo esinjalo: ukuthi into yokugcina umuntu ayidingayo amathiphu alolu hlobo nokunye okunjalo. Ngicabanga ukuthi kungaba ngcono ukuba avume iqiniso futhi athi asinaseluleko, kodwa ngizokwenzenjani futhi uBaba osezulwini unginqumele (umthetho wenkolo nokuziphatha okubi).
Kungenzeka ukuthi amazwi kaRabi Levinger ashiwo ngezwi elikhululekile ngoba ukude nenkinga. Yena nabanye bangase bangazizwa njengonina waleyo ndodana. Lokho akusho ukuthi akuyona impendulo efanele. Ngemva kwawo wonke usizi nenkinga yalesi simo, amazwi akhe afingqa kabi lokho okulindeleke kungqingili ongokwenkolo ukuba akwenze. Ngaphezu kwalokho - amazwi akhe afingqa hhayi okubi lokho wonke umJuda okulindeleke ukuba akwenze. Kuyenzeka ukuba sibe nesihe kunoma yimuphi umuntu (isihe siyindaba ehlobene njengoba yaziwa), sonke sinezinkinga nezinkinga, futhi yile ndlela kanye umJuda okufanele abhekane ngayo nazo.
Okokuqala, iqiniso lokuthi othile ukude nenkinga kufanele limenze asondele noma angakhulumi ngokuhlukana okunjalo kanye nesiqubulo esinjalo.
Bengingakhulumi ngezimpendulo kuphela kodwa nangephimbo ezishiwo ngalo. Kodwa ngisho nezimpendulo ngokwazo azilungile. Okokuqala, ayikho inkinga yokuziphatha lapha, futhi yilapho yonke ingxoxo yaqala khona. Okwesibili, iningi lala macebiso alisizo. Abanye baveza iqiniso ngendlela ekhethayo nechemayo. Enye ingxenye imduduza ngenduduzo engenzi lutho. Umuntu ofanayo ohluphekayo anganquma ukunqoba uKari futhi mhlawumbe uzophumelela, kodwa awukwazi ukumnika iseluleko esivela ohlangothini uKari azolunqoba nokuthi injabulo kaNkulunkulu iyinqaba yakhe. Futhi-ke futhi unezela kuye ngokuthi uziphethe kabi ngoba udumaza abazali bakhe noMdali wakhe.
Ngaphandle kwalokho, maningi amathuba okuthi ngeke akwazi ukubhekana nesimo, njengoba nje ngamunye wethu engeke aphumelele esimweni sakhe. Ngingalindela ukubhekisela kulokho futhi. Mtshele ukuthi akukubi, ngoba kuwumsebenzi onzima kakhulu futhi ongenakwenzeka. Lokhu esikhundleni sokucaphuna amavesi angenalutho kanye nochwepheshe abangacacile abakhethwe ngama-tweezers futhi bangamsizi (ngaphandle uma "bengochwepheshe", ngokungafani nabo bonke odokotela bengqondo emhlabeni, kodwa uma ekholelwa futhi ezimisele.
Uma ungumngane oseduze womuntu onjalo futhi unamandla okumshukumisela esenzweni esinqunyiwe futhi umsekele - kungenzeka. Kodwa hhayi njengeseluleko sesikole esijwayelekile sokubhekana nesimo esibi kangaka.
Amazwi ami azovela maduze nje, futhi lapho kuzocaca kancane.
Ngomhla wesi-XNUMX ku-Elul, ngo-XNUMX
NgoLwesine olwedlule, uRabi uMichael Avraham Neru ubuze ukuthi "indoda kufanele yenzeni" ukuze iphume esimweni sayo. Futhi nganquma ukwenza intando elungile, futhi ngaphendula umbuzo wakhe njengoba ngangazi nanjengokuhlangenwe nakho kwami.
NjengomJuda wase-NH, okwathi, njengawo wonke umuntu, 'bangaki izigigaba azibona', wadlula ezinkingeni namagagasi, ukwehla nokwenyuka, njll., njll., njll. - Ngikwazile ukufingqa izindlela zokwenza nokucabanga ukuthi kwakufanele ngenze ukusiza ukubhekana nezinkinga zami, futhi angase asize abanye ukubhekana nezinkinga zakhe.
Ngikhohlwe elinye iphuzu, elivele emazwini enu, futhi mhlawumbe okokuqala nokubalulekile:
H. Gcina ukuzola nokuzola ezimweni ezicindezela kakhulu.
Yini ezokunika futhi yini ezokwenza uthukuthele? Uma wenza ngenxa yokukhathazeka, ukudideka kanye 'nokucindezeleka' - uzohileleka kuphela futhi ucwile odakeni kakhulu.
Ngakho zibambe, futhi ngomoya ophansi uhlaziye isimo. Uzofunda isifundo, ezincwadini nakubachwepheshe; Futhi okungabalulekile kangako, zifundele wena: ukwazi ukuthi yini ekwehlisayo nokuthi yini ekukhulisayo? Yini ephazamisayo futhi yini epholile?
Eqinisweni, yilokhu okwenziwa yizazi zokusebenza kwengqondo kanye nabeluleki: hlala phansi nawe futhi wenze 'izibalo zengqondo' nawe, futhi kusukela lapho ufika ekuqondeni ngezimpande zenkinga nezindlela zokuyixazulula.
Ukuphawula kwakho mayelana 'nonina wengane', othatha isimo sendodana yakhe, akucaci. Nami ngaphawula ngokucindezeleka okukhulu kwabazali lapho bebhekene nenkinga yendodana yabo, usizi olukhona ngisho noma benqoba ukukhala kwabo ezinhliziyweni zabo.
Ngisho no-Yitzkhak, ohamba emyalweni kaNkulunkulu wokubopha - inhliziyo yakhe ibuhlungu ngenxa yosizi lukanina 'owashintsha ubuso bakhe, indodana eyazalwa iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye, yayingenxa yomlilo nokudla, ngiyaxolisa ngonina khalani nikhale'. Sengathi singabusiswa njengoJosefa ukuthi umfanekiso wesithombe sabazali bethu uzosimela phakathi necala elinzima.
Okokuqala noma ngiqalaza lapha kimina angimtholi lapha umuntu olungile isifiso sakhe afuna ukusifeza, kumele ngixolise ngobukhali bezinto engizibhale kulesi sivunguvungu senkulumompikiswano. UMnu. njengenjwayelo uphawula ngokugagula nangesizotha, futhi mina ebubini bami ngingumuntu oyisivunguvungu.
Kimina kubonakala sengathi izinkulumo enazisho mayelana nokuziphatha okubi kwendaba engingavumelani nazo ngokuqinile, futhi zashiya umbono futhi zavala ngisho nakwamanye amazwi abuhlungu afika kamuva. Ngicabanga ukuthi kwakukhona futhi uhlangothi olulodwa ekwethuleni izinto, futhi wayebonakala ehlukanisiwe kancane kimi.
Okokugcina, kungase kwenzeke ukuthola usizo emazwini akho kumuntu onganqunyelwe, kodwa ngisacabanga ukuthi kungcono ukukubeka endaweni ethe ukuhluka kancane, njengoba ngishilo kuyo yonke ingxoxo.
Konke okuhle futhi ngiyaxolisa.
Ithi kogulayo :: Ulahlekile. Awunalo ithuba. Asikho isidingo sokuya esibhedlela nhlobo. Hamba uqonde emathuneni.
Bese ukhononda ngokuzibulala. Futhi mhlawumbe abafana abalungile bohlobo lwakho baletha abagulayo ekuphelelweni ithemba nokuzibulala?
Kukhona enye indlela futhi. Kungenzeka ukubanikeza izeluleko ezisebenzayo (nakuba kuncane kakhulu ngeshwa, futhi kufanelekile ukukucacisa ngokwethembeka hhayi ukumhlophe), kodwa ngaphandle kweseluleko hhayi lawa macebiso, futhi ngaphandle kokunethezeka okuyinkinga okunikezile okuzojulisa ukukhungatheka ( ngenkathi iqinisa injabulo kaNkulunkulu).
Futhi ngokuqinisekile akulungile ukubapenda isithombe esihle nesingenakwethenjelwa (njengokungathi lezi zinkinga zingabelaphi abangenamsebenzi, futhi njengokungathi ikholwa liphumelele).
Futhi kuncane kakhulu okuyiqiniso ukubachazela ukuthi baziphatha kabi ngoba abazali babo batshale imali kubo futhi uMdali wabo ulindele kubo futhi bavele behluleke futhi bakhuliswe okholweni lwabo. Uqinisile? Yile ndlela izinsizi eziphendulwa ngayo ( R. Barar noYitzha AA, XNUMX)?
Futhi mayelana nomqondo wokuziphatha owethulile. Futhi ukuthi uma abazali bami befuna ngithwale amakhilogremu ayikhulu emhlane wami impilo yami yonke kwakuzodingeka ngikwenze ngenxa yokubonga? Ingabe likhona icala elinjalo lokuziphatha? Sengivele ngikukhumbuze uMaharik ngokukhetha umaqondana. Ngibalula ukuthi sixoxa ngokuziphatha hhayi i-halakhah. Kufanele kube nenkokhelo enjalo ye-halakhic. Kodwa ukusho ukuthi kukhona icala lokuziphatha? Ukuxolela, kutshekile nje. Ngokuvamile, ukubonga kuNkulunkulu akulula neze, futhi ngokubona kwami ​​akukhona okokuziphatha kodwa kungokwefilosofi. Bona izindatshana lapha:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Kukho konke lokhu, kubaluleke kakhulu ukubaduduza ukuthi noma behluleka, cishe wonke umuntu ngeke akumele futhi. Futhi sesivele sitholile ku-Ketubot Lag uma kungenjalo kuye kuHananiya uMishayeli no-Azariya ama-hook amasegimenti kumthwebuli wezithombe, okuthiwa kahle umehluko phakathi kokuhlupheka okumnene okuqhubekayo nokuhlupheka okukhulu kodwa kwendawo kanye nesikhashana.
Amagama amayelana namathuba okuphumelela angamazwi kaDkt. Zvi Mozes, umqondisi weShiloh Institute, omunye wochwepheshe abaphezulu emkhakheni wethu. Futhi usho ngokucacile ukuthi uma kwenzeka ukuguquka kokuthambekela okucacile kunzima kakhulu, kodwa abantu abazimisele kakhulu futhi abanokholo oluqinile bangaphumelela ngesiqondiso esifanele sochwepheshe.
Okunye engikushoyo kuyizinto ezicacile. Ucabanga ukuthi uRabi Kolon wayehlose ukuvumela umuntu ukuba ashade ukuze akhumbule? 🙂 Ubani ovumele indoda ukuthi ilandele abazali bayo e-altare lezinkanuko zayo? Uma engabaleki esigodlweni, uzogqoka ezimnyama futhi azibophe ngomnyama, njll. "futhi ngeke achithe impilo yabazali bakhe ngosizi olubi.
Akekho osindiswayo ezinkingeni zakhe osizini. Buza noma yimuphi usonhlalakahle uzokutshela
, Ukuthi isisekelo sezakhi siwukukhipha umuntu emuzweni wesisulu. Uma umuntu esethathe umthwalo wemfanelo ngokudalelwa kwakhe - uyobe eseyitholile indlela yokuhlengwa. Futhi uma ihlambalaza - futhi iyacasula, ulimi lokucasuka ..
Ngenhlonipho efanele "umkhakha wethu" ushaya indiva izikhundla ezihluke ngokuphelele ukuthi namuhla cishe ukuvumelana kochwepheshe (angisiye uchwepheshe futhi nginezinsolo ezithile mayelana nalokhu kuvumelana, futhi namanje ukushaya indiva ngepeni nje. ngoba uDokotela Sbanibani wathi). Ngaphezu kwalokho, ngisho namazwi akhe, okungenani njengoba uwacaphune, ayanqikaza kakhulu. Ngingasho futhi ukuthi uma ukholelwa kakhulu futhi uzimisele kakhulu futhi ukuthambekela kwakho kungaphelele unganqoba. Bangaki? Futhi bangaki abanye? Bangaki kubo abaphumelele? Ingabe wanikeza izinombolo? Isayensi isebenza ngezilinganiso zobuningi hhayi neziqubulo (mhlawumbe uveze konke, kodwa kulokhu enikushilo angibonanga lutho).
Okunye ukuphawula kwakho kucacile ngempela, njengabanduleli bawo. Ubani lapha owathi uMaharik wayehlose ukuvumela ukukhumbula? Futhi ukuthi sisebenzelana namajaji?! Uma ungaqondanga, ngizochaza isimangalo sami. Indlela yakho inesibophezelo sokuziphatha sokuhambisana nokulindelwe ngabazali ngoba bangizala futhi batshala imali kimi. Ngakho-ke uma bengicela ukuthi ngishade nomlingani wami hhayi lo ongaziwa - ngokubona kwakho bekufanele ngibalalele, akunjalo? Yebo kunjalo. Kodwa ukuthi wenzeni, uthi cha (futhi kanjalo wabusa eRama). Kuphi ukuziphatha lapha? Incazelo: Asikho isibopho sokuziphatha sokulalela abazali lapho sikhetha umngane womshado. Abanalo ilungelo lokungiphoqa ngokuphathelene nokuphila kwami. Ngakho-ke, yini ebalulekile uma ikhunjulwa noma cha? Umehluko phakathi kwabo u-halakhic, kodwa ukhulume ngesibopho sokuziphatha sokuhambisana nezidingo zabazali, futhi kule ndaba akukho mehluko. Ngokuphambene nalokho, ukukhetha owesifazane esikhundleni sowesilisa kuwukuhlupheka okukhulu futhi cishe akunakwenzeka endodaneni, kodwa ukufaka esikhundleni somngane womshado nomunye kuyinto elula engenakuqhathaniswa. Pho kungani kungadingeki ukuba enze lokhu? Futhi ngolimi lwakho: ngubani owavumela indoda ukuthi ibophe abazali bayo futhi ibabangele ubuhlungu benhliziyo obusabekayo e-altare lezinkanuko zayo ezimholela kumlingani ofanayo womshado amfunayo. Ubani ozohlaba izinkanuko zakhe futhi athathe omunye umngane womshado futhi abangele ukwaneliseka okungcwele kakhulu kwabazali bakhe. Futhi ngokujwayelekile, uma engakhululekile futhi enzima kuye - makazimisele futhi akholwe futhi aye kuDkt Moses futhi uzomsiza anqobe. Yini inkinga?
Futhi mayelana nesiphetho samazwi akho, umuntu onomdlavuza uzothola indlela yokusindiswa uma kuphela ekwazi ukukholelwa kuye. Kanjalo nazo zonke ezinye iziguli ezingamahlalakhona. Lezi iziqubulo ngokungangabazeki eziwukunganaki nobuwula obungabazekayo beNkathi Entsha. Bangibuyisela endabeni kaRash Shevdron. Kulula ukuthi uma ukhuluma ngabanye awunandaba nabo. Buza noma yimuphi usonhlalakahle uzokutshela lokhu.
Ake siqale kusukela ekugcineni:
Angizange ngisho ukuthi umuntu onomdlavuza nakanjani uyosindiswa. Ngathi umuntu onesifo esibucayi esibonakala singelapheki, ufuna ikhambi. Inkosi uHezekiya, umprofethi kaNkulunkulu, yathi kuye: 'Ngokuba ufile, futhi ngeke uphile.' Uphenyile waphenya, uthola ukwahlulelwa kwezulu ngothando, imvume yanikezwa udokotela ukuba alulame - angalahli ithemba.
KunomJuda othandekayo, uR. Cohen-Melamed, owahlushwa isifo sokuqina kwemisipha eminyakeni engaphezu kwengu-15 edlule, wabe esetshelwa omunye wodokotela ukuthi wayesalelwe yizinyanga ezimbalwa ephila.” UDkt. futhi uphila kuze kube yinamuhla futhi ubhala izincwadi.Okwamanje ukwazile ukuya emngcwabeni kadokotela owamqinisekisa ngokufa kwakhe osekuseduze):
Mayelana nokuthambekela -
Angizelanga ukuzoqhuba izingxoxo zefilosofi nezesayensi, yebo akunakwenzeka? - Ngibona phambi kwamehlo ami umfanekiso owodwa kuphela, insizwa edidekile futhi enamahloni edabukile phakathi kokuthambekela kwayo nokholo lwayo. Ayikho indlela emhlabeni yokuphuma kukho kokubili umdali nomdali wawo. Ithuba lakhe kuphela lokuphuma obishini ukuthola isixazululo, futhi ngizama ukuthola ikheli lapho okungenzeka khona ukuxazulula inkinga.
Ngiyesaba kancane 'iseluleko sengqondo', ngenxa yezizathu eziningana: banethemba elikhulu, futhi umfana oza nezinga eliphezulu lokulindela futhi ikakhulukazi ukulindela impumelelo esheshayo, angawela ekuphelelweni ithemba. Ngaphandle kwalokho, kukhona abanye abelaphi abangamavolontiya angewona ochwepheshe. Futhi 'ngendlela yabo ephindaphindayo', ezama 'ukunika amandla ubudoda' - kuhle kuphela kwezinye izimo, futhi akubonakali kimi ukuthi lesi yisizathu sawo wonke amacala.
Yingakho ngijike ngabheka ngakuDkt. Zvi Mozes, engingamazi mina mathupha, kodwa isitayela sakhe sokulindela okuhle kodwa esiqaphe kakhulu esikhuthaza ithemba lokuqapha kimi. Kanye nawe, ngimcaphune kafushane nje. Ekuphawuleni kwami ​​​​izindatshana ezimbili zikaYoav Sorek, ngithathe inkathazo yokukopisha izigaba ezimbili eziyinhloko emazwini akhe acacisa amathuba kanye namathuba azo (ngoba 'Isixhumanisi' angazi ukuthi ngenzenjani, okwamanje mina 'Linkopov' ayelapheki :) .
Isipiliyoni sikamelaphi osemnkantshubomvu kulo mkhakha, asihambi ngezinyawo… futhi kungumsebenzi wethu ukwazisa abangazinqumeli ngobukhona bayo, kanye nokwenzeka kokuzama ukuthola usizo kuyo.
Ukuhumusha kwakho kuMaharik ukuthi indodana ayikweleti lutho kubazali bayo akucaci kahle. Ngibona sengathi abanye abantu bayaqonda ukuthi lokhu kumayelana nokuhlonishwa kukababa owaliwa ngenxa ye-mitzvah yendodana yokuganwa kowesifazane, ukuthi uma ethole umfazi wesonto futhi ethanda uMan Mifis uzomthola? UDkt. UMose angasiza umfana ofuna ukwenza uKono afune ukugqashula emshadweni ongavunyelwe, kodwa ahlukane nomshado omuhle ezulwini nakubantu - uNkulunkulu makube njalo.
Futhi kunoma yikuphi, ngisho nalapho insizwa ivunyelwe futhi iyalwa ukuba ishade ngokukhetha kwenhliziyo yayo ngokumelene nentando yabazali bayo, ibophekile ukuba ikhulume nabo izinto ezinhle neziduduzayo, ngabo bonke ubumnene nenhlonipho. Yithi kubo: ‘Bazali abathandekayo, ngiyakuthanda futhi ngikwazisa konke eningenzele khona, futhi ngiyaqiniseka ukuthi niyoba nokuzinikela okungcwele kule ntombazane elungile nowesifazane oyiqhawe’. Futhi ngokuvamile ngisho noma bengabuyisani ngokushesha - bazobuyisana lapho umzukulu ezalwa.
Bayoba nenjabulo bani ngokwenqabela kweKrethe okwadalwa ngokuthi 'izinengiso'?
Ngibhale ngiyaxolisa kule ngosi ngobukhali bezinkulumo zami, ngiyaphinda nalapha (angiqondanga ukuthi kungani kwenziwa imigudu emibili. Angiziboni izinto lapha ezidinga imfihlo eyeqile. Ngabona ukuthi ezinye ingxoxo idluliselwe ku-imeyili lapha ngephutha).
Empeleni, okwakungikhathaza ikakhulukazi kwakuwumongo, kodwa futhi ngangingavumelani kakhulu nokuqukethwe. Futhi izinhlobo zezinhlobo zakho zizongenwa.
Ngokuqondene neMaharik kanye nomqondo wokuhlonipha indawo yabanye, bheka ukuphawula kwami ​​​​kuzihloko lapha:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Ngendlela, kuyacaca ukuthi indlela yokukhuluma kubazali kufanele ibe nenhlonipho.
Konke okuhle futhi ngiyaxolisa
Ku-S.D. XNUMX ku-Elul, p
Izingxoxo zami zakamuva noRabbi Avraham ezenzeke phakathi kwethu ku-imeyili yangasese, futhi zalayishwa esizeni kusihlwa - bezingahloselwe uMaikra ukuthi zishicilelwe esizeni, futhi kufanele zithathwe 'njengokusalungiswa', okungasho ukuthi khombisa isiphetho esibumbene.
Ngiyaxolisa ngokungaqondi. Njengoba ngibhala, ngacabanga ukuthi ngephutha izinto zaya kuma-imeyili avamile esikhundleni sokuya kusayithi, futhi angizange ngibone kuzo noma yini ephambuka enkulumweni eyenzeka lapha esizeni, ngakho ngazidlulisela phambili (ngesikhathi sangempela). ) ukuze kulayishwe kusayithi. Kumanje baqhamuke ngoba sekuphele inkulumo mpikiswano. Futhi ngempela okuthunyelwe kokugcina phakathi kwethu lapho ngibona ukuthi bekungahloselwe lapha angizange ngikulayishe. Noma kunjalo, ngiyaxolisa futhi.
KuRabi MDA ohlakaniphile, ogcwele ukuhlakanipha nesayensi, njengesazi sezomnotho esithembekile kanye ne-daredevil, uDelbish Mada, ukutadisha iTorah futhi ayifundise, futhi uthweswe umqhele ngazo zonke izindlela, okulungile nokuhloniphekile - ukuthula kwakhe kuzobuyiselwa eHada, futhi iTorah nesitifiketi kuzokwanda, ukuze kukhanyiselwe amehlo omphakathi! - Ukuthula nensindiso enkulu,
Ngizofuna okwengeziwe kwalokhu, kungani idolobha liqinisile ngenkinga yokuthi ukwelapha kwengqondo okuqeqeshiwe kuhilela ukusetshenziswa kwezimali okukhulu, ngezinye izikhathi okuvimba labo abakudingayo, futhi kwenza kube nzima kubo ukubekezela nakho.
E-Kochav Hashahar nasezindaweni ezizungezile, bathole isisombululo ngokusungula isisekelo esibizwa ngokuthi 'Chaim Shel Tova' (esiphethwe uRabbi Natan Shalev, urabi waseMevoot Jericho), esiza ngezimali ukwelapha kwengqondo komndeni kanye nabashadikazi kulabo abadinga usizo.
Kuyafaneleka ukwamukela le nkambo yokusebenza kuyo yonke indawo kanye nendawo, futhi kusungulwe izimali ezifanayo ezizokhuthaza futhi zisize ekunakekelweni kwengqondo okuqeqeshiwe komuntu ngamunye nomndeni.
Insizwa yakhuluma ezinkulungwaneni zakwaJuda ngenxa yesandla sayo esesabayo.
Damchavi Kida, Ozithobayo futhi Ngiyabonga, S.C. I-Levinger
UShalev no-Yesha Rab kuMnu. Chen Chen ngezifiso nokuphawula kwakhe.
Nakuye nakimi sizobamba ingquza esivunguvungwini, induku kakaputeni igingqike. Uma umRoma ekutshela inkemba kanye aya, yazi ukuthi iJerusalema phezu kwendunduma yakhiwe.
Siyozuza uLior ekukhanyeni kwezibani, futhi sizosindiswa kuzo zonke izimiso ezinonya. Umuntu uyokhuluma kakhulu kumfowabo, amadodana namadodakazi kanye nesikhonzi esishikashikashikayo. Futhi ngizosayina isicelo kumhlali ohlukunyeziwe, esizomsayinisa unomphela kulo nyaka.
30 Tishrei 10 - 2016/12/35 ngo-XNUMX:XNUMX
Ingxoxo ngale ndaba izotholakala entwasahlobo ezihlokweni:
Roni Schur, 'Kungenzeka ukushintsha (ekwelapheni ukuthambekela okuphambene ku-' Advice of the Soul '), Tzohar XNUMX (XNUMX), kuwebhusayithi ye-' Asif ';
URabi u-Azriel Ariel, 'Ukhona ongashintsha? (Impendulo) ', lapho, lapho;
UDkt. Baruch Kahana, 'Inkolo, Umphakathi kanye Nokuthambekela Okuhlehlayo', Tzohar XNUMX (XNUMX), kuwebhusayithi ye-'Asif'.
UDkt. Zvi Mozes, 'Ingabe Ukwelashwa Kwezimo Zokubuyela Emuva Kuyasebenza Ngokwengqondo', kusizindalwazi se-'Root'.
Isifinyezo esinemininingwane yezinhlobo zokwelapha kanye nezikhundla ezibophezelayo nezingezinhle - ku-Wikipedia, okufakiwe 'ukwelashwa kokuguqula'.
Manje ngithole impendulo yomphakathi we-psychoanalytic kwa-Israyeli "emazwini orabi":
Njengama-psychoanalyst azinikele ekuqondeni okujulile kwengqondo yomuntu kanye nokusiza ekucindezelekeni kwabo ngokwelashwa kwengqondo, sikubheka njengomsebenzi wethu ukuphikisa izitatimende ezihlukumezayo ezisanda kwenziwa orabi mayelana nomphakathi we-LGBT. Izimangalo zokuthi ubungqingili wukuphazamiseka kwengqondo, "ukuchezuka", "ukukhubazeka okudinga ukwelashwa kwengqondo", kuwukwephulwa okungathi sína kwesithunzi nenkululeko yomuntu - futhi kungqubuzana nesikhundla sesimanje esamukelwayo kanye nolwazi lwamanje lobungcweti mayelana nokuthambekela kobulili nobuwena. Ukunikeza 'izifo zengqondo' orabi nabafundisi abangakaqeqeshelwa lokhu akulungile futhi empeleni sibona ukuvezwa kwemibono enjalo njengengozi yangempela emiphefumulweni ngisho nasezimpilweni zentsha nemindeni yazo.
U-Yossi Triast (uSihlalo) - egameni leNhlangano Yezengqondo kwa-Israyeli
Futhi kazi indoda iyisilima noma inamanga. Lokhu akubhalayo kungamampunge impela. Angase abe nesikhundla esisodwa noma esinye embuzweni wokuthi ubutabane buwukuhlanekezela noma cha, kodwa akuhlangene nolwazi lochwepheshe angase abe nalo. Ngakho ubonakala eyisilima. Nakuba kungase kube ukuxhashazwa ngamabomu kwesigqoko sakhe sochwepheshe ukukhuthaza i-value ajenda, usengumqambimanga. Ngishiya umfundi ukuthi akhethe phakathi kwezinketho.
20 Tammuz 07 - 2020/14/43 ngo-XNUMX:XNUMX
Angicabangi ukuthi uyisilima ngempela. Kukhona ukungaqapheli okuphazamisayo lapho, futhi kubonakala nakubantu abahlakaniphile. Uma unesikhathi esanele sokuzigeza ingqondo ngokuthile, uqala ukucabanga ukuthi kuyiqiniso futhi akupheli. Ngeshwa lokhu kwenzeka kancane.
20 Tammuz 07 - 2020/15/00 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngaphendula uPingback lapho
I-Fingback: Qaphela uchwepheshe Kumthetho nemininingwane
U-Henri Bergson Vuliwe Impendulo ekuthuleni okukhulu
Ubani ogibelayo? Vuliwe Ukuvuka Nokuwa kukaBennett Nezincazelo Zazo (Ikholomu 486)
mikyab Vuliwe Ukuvuka Nokuwa kukaBennett Nezincazelo Zazo (Ikholomu 486)